Twttr ndiyo itsva Twitter app kuyedza mitsva mabasa | IPhone nhau
Twttr ndiyo itsva Twitter yekuyedza app
Twitter, iyo yekudyidzana, wanga uchitsvaga makore akati wandei maitiro ekuvandudza nekuita mabasa matsva, uye akawanda haasati apedza kugutsa munhu wese kana kupedzisira ave kushandiswa.
Shanduko zhinji, senge kuwedzera huwandu hwevatambi mu tweet, dzave kufarirwa uye kuvengwa zvakaenzana. Kuedza kushanduka nenzira iri nani uye nemhinduro zhinji kubva kuvashandisi, ivo vagadzira app nyowani.
Iyo twttr app ichave iyo bvunzo app uko beta testers vanogona kuona, kuyedza uye kupindura pamabasa matsva, matsva dhizaini nemitemo mitsva. Pamutemo, iri "Twitter Prototype Chirongwa" uye chirevo chayo ndechekuvaka iri nani Twitter pamwechete. Iwe unogona ikozvino kuona zvakatorwa zvevatori vechikamu neiyo hashtag #LetsHaveAConvo.
Unoda kutibatsira kuvaka zvimwe zvitsva zveTwitter maficha?
Tinoda kuti zvive nyore kuverenga, kunzwisisa, uye kujoina hurukuro - uye tinoda kuziva zvaunofunga.
Saina kuti uve mumwe wekutanga kuyedza yedu nyowani prototype app, twttr. #LetsHaveAConvo
- Twitter Tsigiro (@TwitterSupport) February 20, 2019
Iyo app yakapihwa kuCES mukati memwedzi waNdira uye ikozvino chave kutanga kusvika kune vekutanga vakasarudzwa. Parizvino, zviri kuitika zvishoma nezvishoma pakati pevatori vechirongwa izvo, izvozvi, inowanikwa chete kune iOS. Ini ndichakamirira kuti ndiyedze, asi kune vatove vashandisi veSpanish vanofarira iyo nyowani app yekuyedza.
Kuedza iyo Twitter beta ine inonakidza yekuona shanduko. Unofarira? #LetsHaveAConvo pic.twitter.com/GymMjPvnhS
- Rubén Fernández  (@RubenApps) March 12, 2019
Parizvino Iyo app inoda kuvandudza hurukuro yekutaurirana, kuti zvive nyore kuverenga, kunzwisisa tambo uye kujoina hurukuro. Kune izvi, iyo app yashanduka kuita mameseji sisitimu, yakafanana yakafanana neyemeseji app ine bubble meseji, pane iyo yekumira tweet system yatinayo. Shanduko idzi dzinoita kuti nhaurwa dzinomuka mumhinduro kune tweet dziwedzere kuona.
Mushure mekuvandudza hurukuro iyi, Twitter inoti ivo vacharamba vachishandisa twttr kuyedza zvinhu zvitsva uye ona kana vachida uye vanogamuchirwa kuendesa kune Twitter. Mune ino kesi hatisi kutaura nezve beta vhezheni yeTwitter, asi Izvo zvinogara zviri nyore kuyeuka kuti kunyorera uko zvinhu zvakaedzwa zviri chaizvo izvo, kuyedza zvinhu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Twttr ndiyo itsva Twitter yekuyedza app
Maitiro ekugadzirisa zvakare mifananidzo muCarPlay
Imotokari nyowani, iyo boloncho uye nyowani nyowani dzinouya kubva muruoko rwekugadziriswa kweFortnite